बिवाह गरेर ल्याएकि श्रीमति पहिले नै ८ जना पुरुषसंग बिवाह गरिसकेकाे थाहा पाएपछि… – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > बिवाह गरेर ल्याएकि श्रीमति पहिले नै ८ जना पुरुषसंग बिवाह गरिसकेकाे थाहा पाएपछि…
बिवाह गरेर ल्याएकि श्रीमति पहिले नै ८ जना पुरुषसंग बिवाह गरिसकेकाे थाहा पाएपछि…
admin October 15, 2020 October 15, 2020 जीवनशैली, समाज	0
एजेन्सी । एक जना महिलाले कति जना पुरुषसँग विवाह गर्लिन, एकजनासँग वा दुईजनासँग । तर एक महिलाले भने विवाहमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेकी छन् । एकपछि अर्को गर्दै ती महिलाले ९ जना पुरुषसँग प्रेम विवाह गरिन् । घटना सार्वजनिक भएपछि महिलाका आठौं पतिले प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गरे । प्रहरीले उक्त घटनामा सम्झौताका लागि धेरै प्रयास गर्यो । तर कुरा मिलेन । महिलाले नवौं पतिसँग प्रेम गरेको बताइन् र उनीसँगै हिँडिन् । ***भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्***
त्यसपछि प्रहरीले महिला र उसका नवौं पतिको खोजी शुरु गर्यो । खोजी शुरु गरेको केही दिनपछि प्रहरीले महिला र उनका नवौं पतिलाई पक्राउ गरि उनीहरुलाई स्थानीय अदालतमा पेश गरिएको थियो । महिलाले आफू नवौं पतिसँग बस्न इच्छुक रहेको बयान दिएपछि अदालतले आठौं पतिले दायर गरेको मुद्दा खारेज गरिदिएको छ । ***भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्***
अपडेट : सोह्रखुट्टेमा भएको ग्यास सिलिन्डर वि’स्फो’टमा घर ध्व’स्त, ११ जना घाइते
साक्षात देबी माताको पाउमा छोएर दर्शन गरौ..,तपाइको मनोकामना पूरा हुनेछ ! घरमा के के राख्दा फलिफाप हुन्छ? पढेर शेयर गराैं
यिनै हुन् अढाइ वर्षीय साहको अपहरणपछि घाँटी रेटी हत्या गर्ने क्रुर झाँक्री चिन्नुहाेस्
हिमालमा पुगेर बिकिनीमा तस्बिर खिचाउने युवतीको चिसोले मृ त्यु ( फोटो फिचर )